Chii chiri kuitika pane yako saiti izvozvi? | Martech Zone
Chii chiri kuitika pane yako saiti izvozvi?
Muvhuro, Nyamavhuvhu 15, 2011 China, Gumiguru 27, 2011 Douglas Karr
Vazhinji vedu vatengi vanoongorora yavo analytics zuva nezuva kana vhiki. Dzimwe nguva, vanoshamiswa nemhedzisiro. Zvichida kwaive kutaurwa pane imwe blog, kuburitswa kana pasocial bookmarking saiti. Dambudziko nderekuti havazvione ikozvino… Vanozviona maawa masere kusvika makumi maviri nemana mushure mechiitiko ichi.
Zvizhinji zvekushambadzira ndezve nguva uye simba. Mangwana anowanzo kunonoka kuyedza kurebesa spike munzira. Panguva yaunozviona mune yako Analytics package, zvapera. Yechokwadi-nguva analytics kiyi kune ino zano. Kuisa mari mune chaiyo-nguva analytics chigadzirwa senge Simbisazve (Ini ndaive mushandisi wekutanga weReinvigorate - ichangotengwa nemutengi wedu Webtrends) inogona kukupa iwe ruzivo iwe rwaunoda.
Mutengo wechikumbiro chakadai ndewezita .. kutanga kubva pamadhora gumi pamwedzi. Ndiwo mutengo mudiki wakapihwa zvimwe zvezvinhu. Iko kugona kuona kuti vanhu vangani vari kushanyira saiti yako paawa imwe chete, mepu dzekupisa dzebasa ravo, kutsvaga zviitwa zvavo kuburikidza nesaiti, uye kunyange kuona yakatumidzwa zita revashanyi pane ino saiti.
Kuziva chiitiko pane yako saiti mune chaiyo-nguva kunogona kukupa iwe neruzivo iwe rwaunoda kuti uite Pakarepo shanduko, wedzera spikes mu data nekukasira kuita kumwe kukwidziridzwa, kugadzirisa zvirimo zvisiri kushanda mukati memaawa ekuzvitsikisa… rondedzero inoenderera nekuenderera mberi.
Ongororo Inoti: Nguva Yakashandiswa paSocial Media inguva Yakakodzera Kupa
Aug 19, 2011 pa 4: 16 AM
Ndatenda nekutaura kwaDoug. Tese tine kakupenga nazvo. Tagged pane yedu blog nazvo nguva pfupi yadarika uye zvinotonhorera. Handisi kumirira kuzviona kune imwe danidziro ichatangwa nguva inotevera! Muve nezuva rakanaka.
Aug 19, 2011 pa 4: 26 AM
Ipuratifomu yakanaka uye inozadza yakanaka diki gap mune sutu yezvigadzirwa Webtrends yave nayo. Imi vanhu munoshamisa!